Socio-Political | Small Steps
असल कार्य गरे शत्रुले पनि कदर गर्दछ। हिन्दु धर्मालम्बीहरू, बुद्धिष्ट धर्मालम्बीहरू र अन्य धर्मालम्बीहरू हाम्रो शत्रु होइनन्। औलामा गन्न सकिने केही भतुवा हिन्दुवादीहरूले मेडियामा विरोध जनायो भन्दैमा हामीले हरेस खाने कुरै हुन्न। साह्रा हिन्दु मित्रहरूमा उहाँहरूको जस्तो गैह्र जिम्मेवारी भावना तथा स्वभाव छैन। यी भतुवाहरूले बास्तवमा हिन्दु अस्तित्वको वदनाम गरीरहनुभएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्तीकोलागि कहिले […]
आजभोली कति मानिसहरूले इसाइ आस्थालाई डलरको आरोप लगाउन थालिएको छ। आफ्नो धर्म पैसामा बेच्ने भनी लान्छाना लगाउन थालिएको छ। पैसामा विक्री हुने आस्था कति सस्तो आस्था है? यो आरोपले उक्त समूहको आस्थालाई कसरी उदाङ्गो बनाउँछ सो म यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्न। किनकि उक्त आस्थामा मेरो रतीभरको विश्वास नभएपनि म उक्त आस्थामा हुने मानिसहरूको कदर गर्दछु। […]
रगतलाई किन रातो देख्नुहुन्न?
हे उचाइमा हुनेहरू रगतलाई किन रातो देख्नुहुन्न? हे गहिराइमा हुनेहरू माथि किन उठ्नुहुन्न? हे नेपाली हो मानवलाई किन मानव ठान्नुहुन्न? हे नेपाली हो बुझेर पनि आफ्नो भूल किन मान्नुहुन्न? हे नेपाली हो सबै मानव एक हुन भन्ने कुरा किन जान्नुहुन्न? कारण परमेश्वर विना लाज छैन, उहाँ विना कुनै लाज छैन।
कतिपय मानिसहरूले इसाइ मतलाई पैसाको आरोप लगाउँछन्। “गरीबलाई बेचेर” जस्ता लान्छानाहरू लगाउँछन्। के गरीव पनि बेच्ने चीज हो र? के गरीब iPod जस्तै सबैले खोजी खोजी किन्ने रहर लाग्दो बस्तु हो र? गरीबलाई किनेर कहाँ बेच्न जाने? गरीबलाई कसले किन्ला र? वास्तव मै भन्ने हो भने गरीबलाई किन्ने बस्तुसँग दाज्न मिल्दैन। यो विचार आफैमा नीच […]
Evangelism, Socio-Political, Uncategorized Christians, ndlama, Nepal, Socio-political